Xalinta qilaafaadka lacagta iyo qoyska Soomaaliyeed | Somaliska
Qoysas badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa waxaa ka taagan qilaafaad dhaqaale oo sababa naceyb dhex maraya lamaanayaasha ama kala tag. Qilaafaadka dhaqaaluhu waxa uu ka mid yahay kuwa ugu xanuunka badan qilaafaadyada. Waxa uuna sababaa kala tag deg deg ah. Hadaba sidee lagu xalin karaa arintaan? Isfahanka Qoyska Qodobka kowaad ee aan isleeyahay waa kan ugu muhiimsan xalinta qilaafaadka qoyska waxa uu yahay in lamaanayaashu ay isfahmaan. Haddii aan isfahan jirin dhinac kasta, waxaa soo kala dhexgalaya labada qof shaki kasoo wadada u furaya dhibaatooyin badan. Isfahanka waxaa ka mid ah in lamaanuhu ay fahmaan xaaladooda dhaqaale, haddii xaasku ay isleedahay ninkaaga lacag ayuu meesha lafadhiyaa adiguna aadan waxba meesha ku hayn isfahan daro ayaa jirta. Sida aad la socotid dalka Sweden wixii dhaqaale ku soo gala waa in aad la socodsiisaa Skatteverket. Hadaba maxaadan ula socodsiineyn xaaskaaga ama seygaaga? Hadaba lamaanuhu waa in ay ka wada hadlaan xaaladooda dhaqaale oo ay xisaabtamaan ayagoon u xisaabtameyn sidii dad ganacsato ah balse waa in ay u xisaabtamaan sidii dad asxaab ah. Haddii xaasku ay ogtahay xaalada dhaqaale ee ninkeeda way yaraaneysaa culeyska ay saareyso. Isku samirka Markii la isfahmo, oo labada lamaane ay isku fahansanyihiin xaaladooda dhaqaale waxaa meesha imaanaya isku samir. Haddii dhaqaalaha qoyska uu yahay mid iska liita oo aan labada qof shaqeyn ama haddii ay shaqeeyaan aysan dabooli karin baahida guriga iyo mida dibada sida qaraabada, waxaa muhiim ah in labada qof ay isku sabraan oo aan la isi saarin culeys uusan midkiin ka bixi karin. Dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu sheegaa in ragooda cadaadis dhaqaale ay saaran kaasoo uusan ninku ka bixi karin. Waxaa muhiim ah dumarku in haddii aad fahansantahay xaalada dhaqaale ee seygaaga aadan saarin culeys uusan xamili karin. Ogoow qaraabadaada waa dul saar ee si sharaf leh oo xushamadi ku jirto u weydii ninkaaga markaad qof kale wax u rabto. Raga waxaa laga doonayaa in ay dumarkooda u sabraan markii ay wax waydiistaan. Xasuuso markaad xaaskaaga guursatay waxaad la xididay reerdhan, dadkaas oo dhan wax ayay kaa filayaan ama xaaskaaga ayay kuu soo marayaan. Marka haddii ay fahansantahay xaaladaada dhaqaale bixi wixii awoodaada ah, wixii kalena u sheeg xaalada. Kharaabada reer dumiska ah Dhibaatada ugu weyn ee dhaqaalaha reerka Somaaliyeed ee qurbaha ku nool waxay ka dhalataa telefoonka ka soo dhacaya Soomaaliya. Waa xaqiiq in wadanka ay masiibo ka jirto oo aan isha laga daboolan karin baahida dadkeena balse intii aad isku dayaysid xalinta dhibaatada qof kale ayay dhacdaa in aad gurigaaga dumiso. Qaraabada ka soo wactameysa Soomaaliya waa in ay ka fikiraan in aysan dumin guryaha. Hadaba sidee loo xakameyn karaa arintaan? Runtii jawaabteeda waa adagtahay, waayo aabahaa ama hooyadaa, walaalkaa ama walaashaa oo ku soo wacay way adagtahay in aad dhahdo waxba ma haayo, seedigii oo telefoon kuu soo diray kaba sii daran. Haddii xaaska laguu soo maro meesha musiibo ayaa ka soo socota ee ka digtoonoow. Ninka raga ah marka halkaas laga soo maro waxa keliya ee u furan waa in uu sabro oo bixiyo wixi awoodiisa aha. Balse arintaas xalinteeda ama xakameynteedu waxay ku xirantahay isfahanka kaala dhexeeya xaaskaaga. Ragu masuuliyadooda ha qaateen Raga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ha xasuustaan in xitaa haddii xaaskaga aay shaqeyso, xitaa haddii aad adigu shaqo la'aantahay masuuliyada dhaqaale ee reerkaaga adiga ayay ku saarantahay. Xaaskaaga xaq uguma lihid in ay kula wadaagto lacagteeda balse haddii aad saaxiib ka dhigatid ayada ayaa kuu gacan furmeyso. Marka haddii aadan masuuliyadaada ka soo bixin, ha u maleynin in aad xaaskaaga xaq ku leedahay balse wixii ay kuu garato ayaad leedahay. Haddii ilaahey kuu nimceeyay ee aad shaqeysato waa kheyr, reerkaaga oo ay ku jirto xaaskaaga masuuliyada dhaqaale adiga ayay ku saarantahay. Haddii reerko ilo dhaqaale sida ceyrta ilmaha ay soo gasho waxaa talo ah in aadan kula xisaabtamin xaaskaaga balse aad xasuusiyo in ay dabarto culeyska ka imaan kara xaga reerkeeda. Nolol dhex dhexaad ah Horta haddaan Soomaali nahay waa in aan xasuusanaa nooma furna wado aan ku baashaali karno, oo aan lacag ku gubi karno, oo aan iska tuman karo waayo malaayiin qof ayaa wadankeena gaajo ugu la'aneysa. Xitaa haddii aad reerkaaga dhan Yurub soo galisay oo aan cidi kaa maqney, kuuma furno iska damaashaad waayo Muslim ayaa ilaahey kaa dhigay oo aduunkaan waa lagula xisaabtamayaa. Marka reerka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, waxaa waajib ku ah in ay ku noolaadaan nolol dhex dhexaad ah oo aan lagu talaxtagin. Dhexdhexaadku waxa weeye in xaasku aysan kaar inta iska qaadato aysan dukaamada soo dhameyn, ninkuna uusan baabuur qaali ah iska soo iibsan. Nolol dhexdhexaad ah ku noolaada. Mustaqbalka ka fikira Aduunyadu Sweden kuma eka, isbedel ayaa imaan kara. Wadankaan Ceyrtu ka jirto bari ayaa laga yaabaa in lagu dhaho iska laabo. Marka waxaa muhiim ah in aad ka fikirtaan Mustaqbalka fog oo aad meel wax dhigataan. Reerku si wadajir ah waa in ay u qorsheeyaan mustaqbalka fog oo qarash meel loo dhigtaa. Wixii talo iyo tusaale iyo qodobo kale ee muhiim ah fadlan ku darsada fikradiina.
Qoysas badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa waxaa ka taagan qilaafaad dhaqaale oo sababa naceyb dhex maraya lamaanayaasha ama kala tag. Qilaafaadka dhaqaaluhu waxa uu ka mid yahay kuwa ugu xanuunka badan qilaafaadyada. Waxa uuna sababaa kala tag deg deg ah. Hadaba sidee lagu xalin karaa arintaan?
Qodobka kowaad ee aan isleeyahay waa kan ugu muhiimsan xalinta qilaafaadka qoyska waxa uu yahay in lamaanayaashu ay isfahmaan. Haddii aan isfahan jirin dhinac kasta, waxaa soo kala dhexgalaya labada qof shaki kasoo wadada u furaya dhibaatooyin badan. Isfahanka waxaa ka mid ah in lamaanuhu ay fahmaan xaaladooda dhaqaale, haddii xaasku ay isleedahay ninkaaga lacag ayuu meesha lafadhiyaa adiguna aadan waxba meesha ku hayn isfahan daro ayaa jirta.
Sida aad la socotid dalka Sweden wixii dhaqaale ku soo gala waa in aad la socodsiisaa Skatteverket. Hadaba maxaadan ula socodsiineyn xaaskaaga ama seygaaga? Hadaba lamaanuhu waa in ay ka wada hadlaan xaaladooda dhaqaale oo ay xisaabtamaan ayagoon u xisaabtameyn sidii dad ganacsato ah balse waa in ay u xisaabtamaan sidii dad asxaab ah. Haddii xaasku ay ogtahay xaalada dhaqaale ee ninkeeda way yaraaneysaa culeyska ay saareyso.
Markii la isfahmo, oo labada lamaane ay isku fahansanyihiin xaaladooda dhaqaale waxaa meesha imaanaya isku samir. Haddii dhaqaalaha qoyska uu yahay mid iska liita oo aan labada qof shaqeyn ama haddii ay shaqeeyaan aysan dabooli karin baahida guriga iyo mida dibada sida qaraabada, waxaa muhiim ah in labada qof ay isku sabraan oo aan la isi saarin culeys uusan midkiin ka bixi karin. Dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu sheegaa in ragooda cadaadis dhaqaale ay saaran kaasoo uusan ninku ka bixi karin. Waxaa muhiim ah dumarku in haddii aad fahansantahay xaalada dhaqaale ee seygaaga aadan saarin culeys uusan xamili karin. Ogoow qaraabadaada waa dul saar ee si sharaf leh oo xushamadi ku jirto u weydii ninkaaga markaad qof kale wax u rabto.
Raga waxaa laga doonayaa in ay dumarkooda u sabraan markii ay wax waydiistaan. Xasuuso markaad xaaskaaga guursatay waxaad la xididay reerdhan, dadkaas oo dhan wax ayay kaa filayaan ama xaaskaaga ayay kuu soo marayaan. Marka haddii ay fahansantahay xaaladaada dhaqaale bixi wixii awoodaada ah, wixii kalena u sheeg xaalada.
Kharaabada reer dumiska ah
Dhibaatada ugu weyn ee dhaqaalaha reerka Somaaliyeed ee qurbaha ku nool waxay ka dhalataa telefoonka ka soo dhacaya Soomaaliya. Waa xaqiiq in wadanka ay masiibo ka jirto oo aan isha laga daboolan karin baahida dadkeena balse intii aad isku dayaysid xalinta dhibaatada qof kale ayay dhacdaa in aad gurigaaga dumiso. Qaraabada ka soo wactameysa Soomaaliya waa in ay ka fikiraan in aysan dumin guryaha.
Hadaba sidee loo xakameyn karaa arintaan? Runtii jawaabteeda waa adagtahay, waayo aabahaa ama hooyadaa, walaalkaa ama walaashaa oo ku soo wacay way adagtahay in aad dhahdo waxba ma haayo, seedigii oo telefoon kuu soo diray kaba sii daran. Haddii xaaska laguu soo maro meesha musiibo ayaa ka soo socota ee ka digtoonoow. Ninka raga ah marka halkaas laga soo maro waxa keliya ee u furan waa in uu sabro oo bixiyo wixi awoodiisa aha. Balse arintaas xalinteeda ama xakameynteedu waxay ku xirantahay isfahanka kaala dhexeeya xaaskaaga.
Ragu masuuliyadooda ha qaateen
Raga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ha xasuustaan in xitaa haddii xaaskaga aay shaqeyso, xitaa haddii aad adigu shaqo la’aantahay masuuliyada dhaqaale ee reerkaaga adiga ayay ku saarantahay. Xaaskaaga xaq uguma lihid in ay kula wadaagto lacagteeda balse haddii aad saaxiib ka dhigatid ayada ayaa kuu gacan furmeyso. Marka haddii aadan masuuliyadaada ka soo bixin, ha u maleynin in aad xaaskaaga xaq ku leedahay balse wixii ay kuu garato ayaad leedahay.
Haddii ilaahey kuu nimceeyay ee aad shaqeysato waa kheyr, reerkaaga oo ay ku jirto xaaskaaga masuuliyada dhaqaale adiga ayay ku saarantahay. Haddii reerko ilo dhaqaale sida ceyrta ilmaha ay soo gasho waxaa talo ah in aadan kula xisaabtamin xaaskaaga balse aad xasuusiyo in ay dabarto culeyska ka imaan kara xaga reerkeeda.
Nolol dhex dhexaad ah
Horta haddaan Soomaali nahay waa in aan xasuusanaa nooma furna wado aan ku baashaali karno, oo aan lacag ku gubi karno, oo aan iska tuman karo waayo malaayiin qof ayaa wadankeena gaajo ugu la’aneysa. Xitaa haddii aad reerkaaga dhan Yurub soo galisay oo aan cidi kaa maqney, kuuma furno iska damaashaad waayo Muslim ayaa ilaahey kaa dhigay oo aduunkaan waa lagula xisaabtamayaa.
Marka reerka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, waxaa waajib ku ah in ay ku noolaadaan nolol dhex dhexaad ah oo aan lagu talaxtagin. Dhexdhexaadku waxa weeye in xaasku aysan kaar inta iska qaadato aysan dukaamada soo dhameyn, ninkuna uusan baabuur qaali ah iska soo iibsan. Nolol dhexdhexaad ah ku noolaada.
Mustaqbalka ka fikira
Aduunyadu Sweden kuma eka, isbedel ayaa imaan kara. Wadankaan Ceyrtu ka jirto bari ayaa laga yaabaa in lagu dhaho iska laabo. Marka waxaa muhiim ah in aad ka fikirtaan Mustaqbalka fog oo aad meel wax dhigataan. Reerku si wadajir ah waa in ay u qorsheeyaan mustaqbalka fog oo qarash meel loo dhigtaa.
Wixii talo iyo tusaale iyo qodobo kale ee muhiim ah fadlan ku darsada fikradiina.
Haweenay Muslim ah oo uurleh oo la weeraray
March 20, 2011 at 14:15
Masha’Allah maqaalkaan wax badan ayaan la foolanayay meel aan ka bilaabaanse la’aa walaalka Jimcaale ayaase ku fara yaraystay mahadsanid akhi .
Xaqiiqdii kaalinta guud ahaan ee Soomaalida siiba qoyska kaalin mug leh ayaad ka qaadatay waase waajib aad gudatay , anagaanse weli gudan .
Akhi Allaha inta aad Ummada u fekeraa adna Arimahaaga Alle ayaa kuu dhawraa kuuna hagaajinaa .
nciima cabdicasiis says:
March 20, 2011 at 19:09
asc walal jimcaale waan ku salaamay waxaan rabaa inaan ku waydiiyo su aal aan mowducaan ahayn walaal macaan waxaan ahay hooyo soomaaliyeed marna diidmo la isiiyay macal maxkamda sare way i diiday arintaan hada loo fadhiyo maxay ka bedeli kartaa diidmooyinka mardambe nooma soo dacwoon kartid ayay ii soo qoreen mahadsanid
Wsc, salaan ka dib. Waloow aanan kiiskaaga qaasatan ula socon waxaan filayaa in uu wax ka badalo go’aanka cusub ee la filayo waayo dad badan ayaan maqlay oo sidaada lagu yiri arintuna waxay tahay xitaa haddii aad markasta ku celiso appeal cusub waxba kama badali karaan waayo iyaga xitaa sharci qalafsan ayaa haysta. marka Insha Allah haddii shuruuda laga qaado Soomaalida oo la dhaho dhiig DNA ha laga qaado, waxaan filayaa in aad dad weynaha wax la qabto markaas oo ay dib u eegi doonaan kiisaskii ay diidmada hore u siiyeen.
Walaal Naciimo inkastoo dhulkaan gaalo faa’iidadiisa ay ka badanta Khsaaradiisa haddana waayahaan danbe rajaa iska jirta oo xalay ayaan yar ka maqlaayay isagoo ii sheegayaayay yar kale oo magaalasda nala degan haystana 7 diidno horayna loogo yiri hanala soo xariirin xitaa lacagtiina laga jartay oo hadda loo soo diray warqad ay ku leeyihiin , hadda Sharci cusub soo codso oo dacwadaadii dib u soo bilaaw!!
Halkaa marka rajo yar ayaa ka muuqata mida kalese walaal anigu waxaan dhihi lahaa qof aan Yurub iyo xaaladeeda kasoo bixi karin Soomaaliya ha iska aado!
Haddii aan jilciyo Hooyo waxaan ka wadaa , waxaan aragnaa Hooyooyin , Aabayaal badan oo ilmihii meeshaan inta isaga dhaldhalay ku dayacay markaa ayaa mararka qaar waxaa i qabata Allaha ka ka xaabiya oo Soomaaliya ka geeya !!
Marka haddii aan si kaftan dhable ah kuula hadlo adigoo Hooyo ah haddana xanaaqii hooyooyinka ayaan kaala soo duldhacay markaa Hooyo Soomaaliyeed tiri !
Balse runta lama qariyee waa Aaabayaasha waxa kaalintoodii gabay sinaba eed umma lihidiin Hooyooyinka Qurbaha iyo Dalkiiba haddii aad tihiin!
Wallaahi waa odayaasha waxa kaalintoodii gabay waxmataraasha !
March 20, 2011 at 22:24
asc jimcaale.waa ku mahadsan tahay aqbaraha no soo gudbisid.ille waxaa ku noqonay dad wayo araga wax badan oo naga qarsonaya ayaa inta noga soo gudbisay.walaalow waxaan kale ku weydina.waxaan maqlaay swedan dadan ilma isku leheyn ma keneyso maxaa ka jiro.waxaa la ogoladane ma araagtay dadkan wax isku dhaliin. .dadka caruurta ka maqaantahay ino alle uu keno caruurtoda.ille dhiibkan waa leysla qaba somali waa in leys gacan qabta sida oga guleysan laheynay swedanka.waxaan kale leyahay naciima waxaa tahay hooya xaqana uu ledahay caruurtada.ee jiidkaasta uu mar aad ku heli laheyd caruurtada.allene talada saro waad ku guleysane niyadana ha iska diliin.intaas ayeey taladeyda tahay.insha alaah waa wada guleysan dona.
March 21, 2011 at 06:51
Najma walaal kama hordhici karno sharci aan wali soo bixin, waa run in ahmiyada ay siinayaan caruurta balse lama dhihin dadka aan wax isku dhalin lama keenayo. Insha Allah markii go’aan yimaado ayay noo kala cadaan doontaa.
asc aadaan iidika mahad celinayaa sida qiimaha badan aad nooku soo gudbisiseen fikiradiina wanaagsan waxaan idinleeyahay haga daalina inaad noo soo gubissaan barnaamishyada sidaan oo kale ah aad ayaan uka faaiidnay
A s c aboowe jimaalewaan ku salaamey waxaan ku wediin lahaa intarviyu wan marey cajalna waa marey 4bil jooga jawab ma helin ilaa meeqa la sugaa jawabta kaam baan jooga waa dalkii an imaado iskana dhiibo fadlan isoo jawab
Najmo waqtiga runtii waa kala duwanyahay dadka go’aan looga gaaro, dad waqti gaaban ayay ku qaadataa dadna way ku dheeraataa. Mar haddaad cajalad iyo intervju martay waxba kuuma dhimana. Sida caadiga ah Laanta Socdaalka ayaa sanadkii 2010 bilowday qorshe ay ku dooneyso in dhamaan kiisaska dadka isdhiiba go’aan looga gaaro ugu badnaan 4 bilood marka waa soo dhowdahay go’aankaaga ayaan is leeyahay.